I-Android vs abasebenzisi bamandla be-iphone- nantsi & kutheni le nto senze ukhetho lwethu
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo Abasebenzisi bamandla e-VS ye-VS ye-Android-nantsi & kutheni le nto senze ukhetho lwethu
Abasebenzisi bamandla e-VS ye-VS ye-Android-nantsi & kutheni le nto senze ukhetho lwethu
Umsebenzisi wamandla we-Android
Igama:RadoSmartphone:Xiaomi Mi Max 2
Yeyiphi ifowuni ye-Android oyisebenzisayo kwaye ngoba?
Abanye banokumangaliswa kukwazi ukuba kule minyaka mithathu idlulileyo bendihlala ndisebenzisa i-Xiaomi Mi Max egugileyo ngoku. Inesiboniso esikhulu se-6.44-intshi kunye nebhetri enkulu ye-5300mAh, inani esingafane silibone lidlulwa nakule mihla idlulileyo iifowuni. Ngokungafaniyo neefowuni 'ezinkulu' zangoku ezinezikrini ngaphezulu kweesentimitha ezi-6, eziyilelwe ukuba nezikrini ezimxinwa nezide, iMi Max 2 ibanzi ngokufanelekileyo, eyenza ukuba ilungele iimeko ezininzi zokusebenzisa, kunye nefowuni enkulu eyinyani, hayi nje ende.
Njengomntu othanda ubuchwephesha kunye nomvavanyi, bendihlala ndisebenzisa okwethutyana ezinye ii-smartphones ze-Android kunye ne-iOS, ukusuka kuhlahlo-lwabiwo mali ukuya esiphelweni, kodwa ndikhululekile kakhulu ngeMi Max 2 yam yokutshintsha ngokupheleleyo. Sele ndiza kuqala ukusebenzisa iGoogle Pixel 4 njengomqhubi wam wemihla ngemihla, nangona ndifuna ukucebisa ngefowuni, iSamsung Galaxy Qaphela iya kwenza i-smartphone efanelekileyo ye-Android kubasebenzisi abaninzi bamandla. Ukuba unomdla wokuba namandla apheleleyo kunye nokuguquguquka, tyala imali kwiGalaxy Note 10+.
Kutheni ukhetha i-Android njengomsebenzisi wamandla?
Nangona ndincoma indlela ecocekileyo nokusebenziseka lula kwe-iOS kwii-iPhones, ndiyayixabisa into yokuba i-Android indinika ulawulo olupheleleyo, kwaye indiphatha njengomlawuli wefowuni yam. Zininzi izinto onokuzenza nge-smartphone yakho ye-Android ngokungacofisi kancinci, ngesiqhelo kusetyenziswa iiapps. Nazi ezinye zezinto endizithandayo malunga ne-Android:
Ndingasoloko ndiyenza ukuba ifowuni yam izive ifresh ngokuziqhelanisa nayo
Isikrini sam sasekhaya sangoku, kunye nesona silondolozayo okwangoku. Ukuswayipha ngasekhohlo kubonisa iiwijethi zam. Ngelixa i-iOS ngoku sele ikukufumana iiwijethi zescreen sasekhaya ezinokubakho nge-iOS 14, kwi-Android ungafumana isixhobo sokuqalisa ukuze utshintshe ngokupheleleyo indlela esikrini sakho sasekhaya esijongeka ngayo kwaye siziva ngayo. Ndithenge Isiqalisi seNova kwaye Isiqalisi seSmart , ngoku isebenzisa eyokugqibela iiwijethi zayo ezicocekileyo nezingaguquguqukiyo. Iipakethe ze-icon ziyafumaneka, ezitshintsha indlela ii -apps zakho ezibonakalayo ngayo. Ifowuni yakho ye-Android inokumela ngokupheleleyo ubuntu bakho obwahlukileyo, ngaphaya kwephepha lodonga nje.
Ndingazifumana iiwijethi zeeakhawunti ezininzi ze-imeyile, kwiscreen sasekhaya
Ndiyamangaliswa abasebenzisi be-iPhone balungile ngale nto, kodwa kufuneka uvule usetyenziso ukuze ubone ii-imeyile zakho ziziva zikude lee kum. Ngokwesiqhelo ndinee-akhawunti zam eziphambili ze-imeyile njengamawijethi nokuba kukwisikrini sam sasekhaya okanye kwicandelo lewijethi elityhutyha kude, libonisa ii-imeyile zam. Lo ngumzekelo nje omnye wokulondolozwa kwexesha endikwaziyo ukulijonga xa ndisebenzisa i-iPhone.
Ndiyakwazi ukwenza izinto ezininzi ngokuzimeleyo kwi-Android
Ngakwesobunxele ndisebenzisa i-screen split-screen multitasking, ngasekunene ndiqhuba ii -apps kwimowudi yewindows. Ndingumsebenzisi we-iPad okhutheleyo, kodwa nakwi-iPadOS ukusasaza izinto ezininzi kubi ngakumbi kunokuba kunjalo kwiifowuni ze-Android, nakwi-iPhone - yona kunye neapos phantse azikho. Umfanekiso-mfanekiso ekugqibeleni iza ne-iOS 14 , kodwa uthini malunga nokwahlula-hlula isikrini okanye iiwindows ezisebenzayo? Abo bebekho kangangeminyaka embalwa kwi-Android. Ngapha koko, sesona sizathu siphambili, esona sizathu sokuba ndingafuni ukutshintshela kwi-iPhone-ukungabikho kwescreen sokuqhekeka kwescreen.
Ndinokufikelela uninzi lweefayile kunye neefolda kwifowuni yam
Njengakwikhompyuter, ndinokukhangela ngokulula phantse kuzo zonke iifolda kwifowuni yam, ukujonga iifayile ngaphakathi, okanye ukwenza ezam iifolda, yithi, amaxwebhu. I-iOS kutsha nje yongeze usetyenziso lweeFayile kwaye ii-apos zisasikelwe umda kakhulu, zibonisa iifolda ezisuka kwiiapps ezimbalwa eziyixhasayo. Kwi-Android, unokufikelela kwiifayile ezininzi kunye neefolda, kubandakanya nezo zikwikhadi lakho le-MicroSD, ewe, yinto uninzi lweefowuni ze-Android ezikuvumela ukuba uyisebenzise.
Umndilili wefowuni ye-Android unokubuyisela ikhompyuter
Ngeeapps ezinje ngeSamsung Dex okanye iSentio ifowuni yakho ye-Android inokuguqula ikhompyuter. I-Android 10 inemowudi efihliweyo, engaphuhliswanga yedesktop, ke siyazi ukuba into enkulu inokuba iza. Kodwa nangoku, iifowuni eziphambili ze-Samsung zinenkxaso ye-DeX, ejika i-smartphone yakho ibe yindawo yekhompyuter xa uyifuna. Qhagamshela esweni, kwibhodi yezitshixo kunye nemouse, kunye nefowuni yakho yesikrini sasekhaya sijika sibe yidesktop enjengekhompyuter yeWindows, kwaye iiapps ziqala ukuvula kwiifestile, ziguqula ngokupheleleyo amava akho.
Nokuba awusebenzisi iflegi yakwaSamsung, unokukhuphela isindululi esifana ne- ndiyeva , owenza umsebenzi ofanayo. Nayiphi na ifowuni elungileyo ye-Android inokubakho ngokusemthethweni ukuba ibe sisixhobo sakho semela yaseSwitzerland, leyo yeyakho zombini ifowuni kunye nekhompyuter yakho.
Ndingabaleka iLinux kwifowuni yam ye-Android ukuba ndiyafuna
I-Linux eqhuba kwifowuni ye-Android nge-Debian noroot app. Yileyo & apos; s kangakanani inkululeko yabasebenzisi be-Android. Nangona ukhetho lwangaphambili lusebenza ngendlela ebhetele, ukubuyisela inkqubo yedesktop enje ngeDebian Linux kwi-Android kulula, enkosi kwiiapps ezinje I-Debian noroot . Njengoko igama lisitsho, awudingi ukuyincothula ifowuni yakho okanye wenze nantoni na engaphezulu kokukhuphela usetyenziso kuGoogle Play kwaye usebenze.
Kodwa kutheni umntu efuna ukuqala i-Linux kwifowuni yakhe, nangasiphi na isizathu ngaphandle kokufuna ukwazi? Ewe, I & apos ndikwazile ukuqhuba iinkqubo zedesktop ezinje ngeChromium, Audacity kunye neGimp kwifowuni yam ye-Android kusetyenziswa i-Debian noroot app esele ichaziwe. Oku kuyathandeka kukodwa. Kwaye ukuba ndikhetha ukwenza isipili kwifowuni yam & apos kwiTV ngaxeshanye, ndifumana elinye ithuba lePC kwifowuni yam ethembekileyo ye-Android.
Nokuba ubona yonke le nto ingenantsingiselo ngoku, cinga ngamathuba kwixesha elizayo. Njengoko ii-smartphones ze-Android ziqhubeka ukuba namandla ngakumbi, ngenye imini baya kuba nakho ukusebenzisa iLinux kunye nesoftware yedesktop ngaphandle komzamo, kwaye mhlawumbi neWindows.
Ndingakhetha isidlali somculo sam esingagqibekanga
Le ilula. Kuthekani ukuba ukhuphele ezinye zeengoma ezininzi zasimahla ezikhoyo kwi-SoundCloud? Ungazidlala njani ezo kwi-iPhone yakho? Kwi-Android andinakukhetha kuphela isidlali somculo esingagqibekanga, kodwa ndinazo neefolda zomculo kwiwijethi yesikrini sasekhaya, ukuze ndikwazi ukukhangela iingoma zam kwaye ndidlale ezi ndizifunayo, nokuba zivela phi na, ngaphandle kokuvula usetyenziso.
Ngokucacileyo ayizizo zonke, kodwa ndicinga ukuba ndiyivezile inqaku. Kungcono okanye kubi, iGoogle & apos; izibonelelo ze-Android zabasebenzisi kunye nabaphuhlisi banenkululeko engaphezulu kune-Apple kwi-iPhone. Ndiyasiqonda ngokupheleleyo ukuba kutheni abasebenzisi be-iPhone banokukhetha ukulula kunye nokusikelwa umda kwe-iOS, njengoko konke kubonisa ukhuseleko olungcono, uzinzo kunye nokusetyenziswa ngokulula.
Kodwa abasebenzisi abafuna ukwenza kangangoko kunokwenzeka ngeefowuni zabo kufuneka bahlale behamba nge-Android, nokuba ingathandeki kwaye ayingqinelani inokubonakala okanye izive ngamanye amaxesha. Ngomzamo othile, unokwenza i-Android ibe yeyakho, kunye nefowuni yakho enobubele.
Umsebenzisi wamandla we-iPhone
Igama:U-PreslavSmartphone:IPhone 11 Pro
Yeyiphi i-iPhone oyisebenzisayo ngoku kwaye ngoba?
Ngoku ndisebenzisa i-iPhone 11 Pro. Ndisakhala ngenxa yokunqongophala kwe-3D kuyo, kodwa-ngelishwa-i-iPhone XS Max endandiyisebenzisa ngaphambili yayingenanceba. Ke, uthanda okanye ungathandi, ndatsalwa ndangena kwi-2019, ndikhaba kwaye ndikhwaza.
Kutheni i-iPhone? Ewe, izizathu ezibini- i-iOS kunye nekhamera. Masikhuphe nganye nganye.
Ngaba i-iPhone ineekhamera ezigqwesileyo?
Kukho izixhobo ezimbalwa ze-Android ezenza ngcono kwiimeko ezininzi. Kodwa ndicinga ukuba sonke singavuma ukuba i-iPhone ineekhamera ezilula kwi-5 ephezulu, ke oko kulungile ngokwaneleyo, akunjalo?
Yintoni eyona nto ndiyithandayo ngabo? Zihambelana kakhulu kwaye ziqikelelwa. Ndingaba ndikhangeleka kwindawo enamehlo am amabini kwaye ndingacinga ukuba i-iPhone izakuyibamba njani.
Iifowuni ze-Android ziya kuthi ngamanye amaxesha… zikumangalise- kusenokuba mnandi, kungothusa.
Oku kuluncedo kakhulu kum kuba ndisebenzisa i-iPhone njengesixhobo. Ndihlala ndirekhoda i-B-roll footage (nditsho ne-A-roll ngaphambi kokuba ndithenge ikhamera) yesitishi sam seYouTube nge-iPhone nje, kuba andisoloko ndijikeleza ikhamera yam. Ndingafumana amanyathelo apholileyo ngelensi ebanzi, ndingazisa izifundo kufutshane nefowuni. Ndenza i-AirDrop ezo kwi-Mac yam kwaye zikulungele ukungeniswa ngaphakathi kwi-Final Cut.
Ewe ndisebenzise iifowuni ezahlukeneyo ze-Android ngeenjongo ezifanayo ngaphambili. Ngamanye amaxesha ndandiye ndibambe imifanekiso ekhangeleka ibhetele kunale yayiza kwenziwa yi-iPhone, ngamanye amaxesha ndandifumana i-jittery, umbala odidekile. Andizithandi izimanga.
Ewe, i-iOS nayo inokuba nolawulo lwekhamera. I-App-Moment
Kuyavunywa, uninzi lweefowuni ze-Android ziza neendlela ezintle zemanyuwali kwiinkqubo zazo zekhamera. Kwi-iPhone, kufuneka ulobe i-app efanelekileyo yokurekhoda ividiyo ukuba ufuna iimpawu eziphambili. Kodwa amathuba akho-uya kukhawuleza ufumane i-app eqinileyo, ezinzileyo, eneempawu, ekunika yonke into oyifunayo.
Ndiza kuthetha ngakumbi malunga neapps kwicandelo elilandelayo -
Kutheni ukhetha i-iOS (i-iPhone) njengomsebenzisi wamandla?
Kulungile, ayinakho ukwenza ngokwezifiso-kodwa ukuba kufanelekile, andikhathali malunga neepakethe ze icon. Ikhompyuter yam yeWindows inayo iphepha elifanayo ukusukela ngo-2010-ish. I-MacBook yam isenayo iphepha lodonga laseCatalina. Cinga ukuba ndityale kangakanani 'ukwenza ngokwezifiso' ifowuni yam.
Ndiza kuthi, ndisacaphuka kakhulu yindlela i-iOS inyanzelisa ngayo ukuba ii-icon ze-app zi-odolwe kwimiqolo engqongqo kwaye ingavumeli izithuba ezingenanto ukuze ulungiselele ngcono ii -apps zakho ngokomxholo. Kodwa yile pilisi endiyifundileyo ukuyiginya.
IOS indinika iiapps endizifunayo
Nantsi into nge-iOS-iya kuhlala inee -apps zokuyila ezingcono ngokungcono kune-Android. Kungenxa yokuba baneempawu ezizodwa okanye ngenxa yokuba ziqhuba ngcono.
Kwaye, njengoko unomsindo njengokuba unokuba ukhona ngoku, ndiza kukubuza oku - ungandifumana i-app yevidiyo yokuhlela ividiyo ye-Android, exhasa amagama aphambili? Makhe ndikusindise ixesha-zimbini. Enye yiKineMaster, enye yenye iVivaCut. Ewe, ngobuchwephesha baxhasa amagama angundoqo, kodwa kuphela oopopayi- ulungiselela kwangaphambili intshukumo yomgama okanye ukutshintsha ubungakanani bomaleko wakho ... kwaye kunjalo. Awunakho ukuyitshintsha ngokuguqukayo amacebo okucoca ulwelo, ukuqaqamba, umahluko, njlnjl.
Kwaye andizukuthetha nokuba zi-clunky kwaye zinzima kangakanani eziapps ukuba zisebenzise.
Ukuyikhupha phezulu, iVivaCut ayinazintloni 1: 1 ikopi ye-Enlight Videoleap - usetyenziso lokuhlela ividiyo okwangoku olufumaneka kuphela kwi-iOS kwaye eneneni intle kakhulu. Ndiyisebenzisa kuko konke ukuhlelwa kwam okukhawulezayo kwi-iPhone okanye kwi-iPad kwaye inayo yonke into endiyifunayo, ukufakwa kweqhosha elifanelekileyo kubandakanya.
Kulungile, uthini ngezinye iinkqubo zokusebenza? Makhe sijonge enye into endiyithandayo - umculo kwaye, ngakumbi, ukudlala isiginkci.
Iminyaka, i-Android ibisilwa nomcimbi we-latency yeaudio, nto leyo eyenze ukuba kungabinakho ukuba nesandi esilixesha lokwenyani kwiimvumi zokusebenza eqongeni. U-Apple unazo ezi zinto ukusukela ngantoni… 2010? IPhone 4? Wowu.
Kule mihla, ukuba uthenga i-midrange ye-Android kwaye uqalise usetyenziso olunje ngeTonebridge (usetyenziso lwegitare), uya kubuliswa ngomyalezo othi 'Unokuba namava odiyo yomsindo ngelixa udlala' okanye into elayini. Ewe, ukuba uthenga i-iPhone SE (2020) yeedola ezingama-400, okanye endala, ubethe i-iPhone okanye i-iPad kwi-Ebay, usaya kufumana i-ultra-low latency kwaye igajethi iya kusebenza ngokugqibeleleyo njengeprosesa yegitala indawo yokusebenza.
Abaphuhlisi beqela lesithathu bayithathele ingqalelo loo nto kwaye kukho ubuninzi bezinto zomculo kunye neeapps ze-iOS kunye ne-iPadOS. Kwi-Android… ewe, unokhetho ezimbalwa, eziluhlobo lwe-meh, kwaye ezinokuthi okanye zingasebenzi ngokwanelisayo.
Ndihambile ndaya kuzilolonga ngesigingci nje, iaudio interface, kunye ne-iPhone. Kutshanje wenze ingoma yonke usebenzisa i-Pro Pro kuphela , ukubona nje ukuba kunokwenzeka na. Ndingayenza kwi-iPhone, nayo, nangona kungxama ngakumbi kwiscreen esincinci. Kodwa andinakwenza nantoni na kwi-Android.
Andikuphosi nyhani ukwahlula-hlula
Ndibe ngumsebenzisi onomdla we-Android ixesha elithile. Ndade ndayixhoma i-Samsung Galaxy Note Edge kangangeminyaka embalwa kwaye ndayincoma ngezinto ezininzi, imisebenzi yayo emininzi ibandakanyiwe .
Ngelixa ngamanye amaxesha iyacaphukisa into yokuba i-iPhone ayinakuhlulahlula isikrini sayo, ke ndinokujonga ngokukhawuleza into ethile kwaye ndibuyele kwinto ebendiyenza, ayisiyiyo into etshintsha umdlalo. Masibe nobulungisa, ixesha elininzi sifuna ukwahlula-hlukana kwiifowuni zethu, kungenxa yokuba sifuna ukuba ividiyo ye-YouTube iqhubeke nokudlala ngelixa sisenza enye into (phendula i-imeyile) ngokukhawuleza okukhulu.
Ukusetyenziswa ixesha elide kwescreen sokwahlulahlula okanye iifestile ezidadayo kumboniso omncinci? Ewe… andicingi ukuba yinto endiyithandayo ukuyenza kule mihla.
Ngesizathu esithile, ezinye iifowuni kumhlaba we-Android zisenemicimbi ethile xa kufikwa kumataniso eBluetooth. Isamsung ibonakala ingoyena mntu uphule umthetho apha-ndinengxaki enkulu yokubhangqa kwi-smartwatch yeqela lesithathu okanye kwikhamera yesenzo ngeefowuni ze-Samsung kunalo naluphi na uphawu.
Iifowuni kwelinye icala… kakuhle, 'iyasebenza'. Ndiza kuqaphela, ukuba ayisoloko izenzekelayo, enobunzima kwaye iyacaphukisa. Umzekelo, kufuneka ungene kwiiSetingi kwaye uqhagamshele i-iPhone yakho kwikhamera yesenzo sakho somqondiso we-Wi-Fi ngesandla, emva koko kufuneka ubuyele kwinkqubo yekhamera yesenzo kwaye uqhubeke nento obufuna ukuyenza ukusuka apho. I-GoPro ikulungisile oku kwiminyaka yakutshanje (iapp ngoku inolawulo kwi-Wi-Fi ye-iPhone kwaye iya kudibanisa ikhamera yakho yeGoPro ngokuzenzekelayo), kodwa ezinye iikhamera azikabambi.
Okukwintsusa - ngumba onamava angaphambili kunye 'negama'. Nanini na xa ndibona into enomdla exhasa zombini i-Android kunye ne-iOS, ndiqinisekile ukuba iya kusebenza ngokungagungqiyo nge-iPhone, kodwa ixhalabile ngokuyibhangqa kwi-Android.
Ukukhululeka ukwenza ngokwezifiso kwaye ufake nayiphi na i-OS oyifunayo kwifowuni yakho inokuba nomtsalane kwaye yenze abanye abantu bahleke. Kodwa xa kuziwa ekusebenziseni igajethi ethile njengesixhobo, konke kuya kwimibuzo emithathu:
Ngaba esi sixhobo sinempawu endizifunayo?
Ngaba esi sixhobo siyangena ekuhambeni kwam ngaphandle kokuphazamisa?
Ngaba esi sixhobo singongeza ixabiso kwinkqubo yam?
Okwam kunye nento endiyenzayo, i-iPhone iphendula 'ewe' kuyo yomithathu imibuzo. Ngaba oku kuthetha ukuba kukuphela kwayo yonke into i-smartphone kuwo wonke umntu? Ngokuqinisekileyo akunjalo. Yeyiphi ifowuni ephendula ngo 'ewe' kuyo yomithathu imibuzo ngetyala lakho? Icandelo lamagqabaza livulekile!
Inqaku lomnyele le-5 lomnxeba
Ubomi bebhetri i-samsung galaxy s5
I-iphone 5c inyusa ixabiso leselula
Ikhithi yebhetri esemthethweni ye-Samsung Galaxy Note 4 ilapha
I-Apple iPad Pro (2021) vs Samsung Galaxy Tab S7
Eyona iPad intle onokuyithenga ngoku yi-iPad endala
I-16GB i-Apple iPhone 5c yasimahla kwi-Best Buy ngesivumelwano seminyaka emibini
Amatyala e-Samsung Galaxy Qaphela i-5 kunye ne-Samsung Galaxy S6 EDGE + avuza
Ulujonga njani kwaye ucime imbali yokuKhangela kwelizwi kuGoogle
Inqaku le-smartphone linokubusindisa ubomi bakho. Nazi iiapos zokwenza ukuba zisebenze
Isikrini esibonisa ukuba uvavanyo lwe-Moto Z Android 8.0 luyaqhubeka